Dihin'ny Varika Maneran-tany: Zoma 30 Oktobra 2020 - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Dihin’ny Varika Maneran-tany: Zoma 30 Oktobra 2020
Mankalazà ny dihin’ny varika maneran-tany! Ndeha hahely amin’izao tontolo izao ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny varika mandritra ny Zoma faha 30 Oktobra 2020 ho avy izao. Ny fankalazana dia afaka tanterahina mandritra ny herinandro mialoha na aorian’io daty io.
Hankalaza ny andron’ny varika ihany koa isika eto Madagasikara ny Zoma faha 30 Oktobra 2020.
Amin’ity taona ity dia indro ny lohahevitra eto amin’ny LCN manokana:
Manana lohahevitra iraisana ihany koa isika eto Madagasikara, iarahana amin’ireo fikambanana maro samihafa ary tarihin’ny Ministera ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy
Voarakitra ato avokoa ny torolalana momba ny fankalazana ny dihin’ny Varika Maneran-tany 2020. Alaivo eto.
Ireo Logos novokarinay azo ampiasaina ho an’ny taona 2020
Ireo olona, vondron’olona sy fikambanana maneran-tany dia entanina hampiasa ireto logos manaraka ireto ho an’ny fankalazana tanterahiny na ao amin’ny tambazotra sosialy na amin’ireo fitaovana fanentanana hampiasaina.
Amin’ity taona ity dia varika karazana telo no nosafidiana hampiasaina amin’ny logos: ny Varika atao hoe Eulemur collaris, ireo Simpona (Propithecus diadema) ary ny ary ny Sifaka atao hoe Propithecus coronatus. Manentana anao izahay hampiasa iray amin’ireo karazany ireo amin’ny fankalzana atao sy ireo fitaovana entina mankalaza.
Ato amin’ny Dropbox folder miaraka amin’ny soratra hoe « World Lemur Festival 2020 » ary « World Lemur Day October 30, 2020 », ary misy mainty sy fotsy ny soratra. Raleway font no anaran’io karazana endrika fanoratana io (azo alaina eto amin’ny Google Fonts); Entanina ianao hampiasa ny endrika fanoratana « Raleway » rehefa manamboatra fitaovam-panabeazana ho an’ny fankalazana.
Ao anatin’io Dropbox folder io ihany koa ny sarisary nampiasaina tamin’ireo logos ireo. Ary i Caitlin Hansen no mamorona azy ireo.
Alaivo eto ireo logo ao anaty dropBox